Madaxweynaha oo ka qaybgalay Sanad Guurada 21aad ee ciidanka Qaranka oo ku beegnayd maanta | Saxil News Network
Madaxweynaha oo ka qaybgalay Sanad Guurada 21aad ee ciidanka Qaranka oo ku beegnayd maanta
February 2, 2015 - Written by admin
Hargaysa (Saxilnews)- Madaxweynaha Qaran Somaliland Mudane Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu maanta ka qaybgalay Sanad Guurada 21aad ee Ciidanka Qaran Somaliland oo lagu qabtay Kuliyada tababarka saraakiisha ee Dardarweyne.
Madaxweynaha oo markii uu halkaasi gaadhay ugu horayn salaan madaxweyne ka qaatay ciidanka qaranka Somaliland, ka dibna uga sii gudbay dhinaca kuliyada, isaga oo xadhiga ka jaray mashaariic dhawra oo halkaasi uga hirgalay ciidanka qaranka sanadkii tegay ee 2014 ka oo ay ugu waa weynaayeen, Furitaanka guri balaadhan oo loo dhisay Saraakiisha iyo Saraakiil ku xigeenka Kuliyada tababarka dardarweyne, gurigan oo qaadi doona 250 Sarkaal.
sidoo kale waxa uu madaxweynuhu xadhiga ka jaray qolka shirarka kuliyadaha oo qaadi doona 250 Sarkaal, waxa kale oo uu madaxweynuhu soo kormeeray dhismeyaal cusub oo loogu talo galay inay ugu yaraan 20 sarkaal ku nasan karaan, kuna qadayn karaan, waxna ku daawan karaan, isaga oo madaxweynuhu uga mahadnaqay saraakiisha iyo taliyeyaasha Ciidamada, dedaalka iyo horumarka ay ka muujiyeen dugsiga tababarka saraakiisha iyo guud ahaanba ciidamada qaranka Somaliland.
madaxweynaha oo ku guda jira mashaariicda kala duwan, wuxuu ugu danbayn xadhiga ka jaray hool weyn oo loogu talo galay inay 200 oo sarkaal ku cuntayn karaan kaasi oo ay u dhamaystirnaayeen guud ahaan qalabkii loogu talo galay, waxaanu mdaxweynuhu soo kormeeray guud ahaan Kuliyada, isaga oo faah-faahina ka siiyey taliyaha ciidanka qaranka Somaliland, Ismaaciil Shaqale.
ka dibna waxa madaxweynuhu ku soo laabtay xaruntii loogu talo galay inay ka dhacdo xaflada sanad guurada ciidanka oo ahayd isla Dugsiga kuliyada gudihiisa laguna qabtay hool weyn oo loo asteeyey xaflada.
halkaasi oo markii madaxweynuhu soo gaadhay ay ka bilaamantay xafladii sidii caadadu ahaydna lagu bilaabay aayadaha qur’aanka kariimka ah, waxaana ku xigtay riwaayad loogu magacdaray Isma-qabanayaan laba oo uu sameeyey Abwaan gaashaanle sare Cali Barre Xuseen oo kaalin weyn kaga jira dhanka Curinta iyo hal abuurnimada Ciidanka Qaranka.
ka dib markii ay dhamaatay riwaadu waxa la gudo galay khudbadihii munaasibada, waxaana hadalka bilaabay gaashaanle sare Batuun Maxamuud Guuleed waxaanu ku soo dhaweeyey hogaanka tababarka gaashaanle sare Axmed Tansaani, oo isna ku soo dhaweeyey taliyaha Ciidanka Qaranka Ismaaciil Shaqale oo isna ku soo dhaweeyey Wasiirka Gaashaandhiga Mudane Axmed Xaaji CalI Cadami oo isna ku soo dhaweeyey Madaxweynaha Qaranka Somaliland.
Madaxweynaha oo isna hadalkiisa ku bilaabay sidan:-
Asalaamu Calaykum Waraxmatulaah.
Maanta oo ah maalintii aasaaska Ciidanka Qaranka, waxaan hambalyo iyo bogaadin gaar ah u dirayaa Ciidanka Qaranka, xaasaskooda iyo caruurtooda meel kasta oo ay joogaan, anigoo guud-ahaanba Ciidamada kala duwan qalabka sida hambalyo u diraya. Waxaan sidoo kale hambalyaynayaa dhamaan shacab-weynaha Somaliland gudo iyo debadba.
Ciidamadu waxay ka mid yihiin tiirarka qarankani ku taagan-yahay, cududa bulshadani dugsanayso ee ay ku seexato, waxaanay calaamad iyo astaan u yihiin dawladnimada iyo kala-danbaynta bulshadani ku taamayso.
Ciidamadu waa difaaca qaranka, waa dal-jirayaasha u dibjira una dayacma illaalinta dadkooda iyo dalkooda, waana salka iyo dayrka ugu adag ee nabadgelyada aynu ku faano.
Anagoo ka duulayna muhiimada ay cududa ciidamadu dalkan ugu fadhiyaan, isla markaana dareensan duruufahooda gaar ahaaneed waxaanu tacab iyo dedaal gelinay kor u qaadida tiradiina, tayadiina, saanadiina iyo mooraalkiina, waana ta keentay in sadex-jeer mushahar ama gunno laydiin kordhiyo intii Xukuumadaydu talada dalka haysay.
Anigoo ogsoon in dedaalada la sameeyey weli aanay daboolin duruufihiinii gaar-ahaaneed, waxaan idin dareensiinayaa in aad u shaqaynaysaan dalkiinii, uguna dulqaadataan darayada iyo debadyaalka, maxaa yeelay waxaad u soo diyaar garawday in aad dhiigiina u daadisaan, dalkaaguna wuxuu u qalmaa in aad u dhimato.
Waxaad ka war-haysaan in aanu sannad kasta kor u qaadno Miisaaniyadda Ciidammada oo maraysa 57,000,000 USD taasoo iminka kor u dhaaftay gebi-ahaanba Miisaaniyadii Qaranka ee 2010 ee aan dalka kula wareegay oo ahayd 47,000,000 USD, halkaana waxaa qof kastaa uu ka garan-karaa ahmiyadda aanu siinay Ciidammada qalabka sida.
Anagoo sanad-kasta kobcina saanada iyo qalabka aad ku hawlgashaan, isla markaana wakhti iyo dhaqaale badan gelinay derajada garbihiina ka bidhaamaysa oo aan aaminsanahay in ay qayb muhiim ah ka tahay haybadda iyo hannaanka kala-danbaynta ciidamada.
Waxaad ku calool samaataan in dadkiinu ogyihiin waxaad ugu maqantihiin dawlad-ahaan aanu ku hawlan-nahay daryeelkiina, waxaanan idin farayaa in aad mar walba illaalisaan dhisbiliinka ciidanka oo ah waxa aad kaga duwan-tihiin dadka shicibka ah.
ka dib khudbada madaxweynaha waxa iyana halkaasi lagu soo xidhay kuliyada tababarka saraakiisha oo nasiib wanaag la dabaaldegay sanad guurada 21aad ee ciidanka qaranka Somaliland oo ay ka mid ahaayeen balse ay iyagu kaga duwanaayeen tababarka u soo xidhmay maanta, waxaana shahaadooyin la gudoonsiiyey saraakiil ka kala socday Ciidanka Qaranka, Ciidanka Booliska, Ciidanka Asluubta iyo Ciidanka Badda waxaanu madaxweynuhu abaalmarino qaaliya gudoonsiiyey saraakiishii galay kaalmaha koowaad, labaad iyo saddexaad.
Sidoo kalena waxa uu madaxweynuhu shahaado sharaf gudoonsiiyey 10 sarkaal oo ahaa kuwii ugu sareeyey saraakiishaasi tababarka kuliyadu u soo xidhmay, kadibna waxa halkaasi ku soo xidhan tahay xafladii loogu dabaaldegaayey Sanad guurada 21aad ee ciidanka qaranka iyo xafladii xidhitaanka tababarka layliska saraakiisha ciidamada oo ka koobnaa xidigle ilaa dhame ama kabtan.